स्वास्थ्य सन्देश Archives - Page4of 19 - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
२०७८ माघ ३ गते १८:२१
काठमाडौं । महामारी भाइरसले विश्वभर तहसनहस बनाएको छ । ओमिक्रोन आएपछि अवस्था झन् गम्भीर बनेको छ । यो घातक भेरियन्टको आगमन पछि भारतमा कोरोनाका नयाँ दैनिक केसहरू दुई लाख नाघेको छ। कोरोनाको कुनै स्थायी उपचार छैन र यसै कारण विज्ञहरूले कोरोना रोकथाम र रोकथामका...
पिसाब रोक्ने समस्या छ ? होसियार ! पिसाबथैलीमा आउनेछ खतरनाक समस्या
२०७८ पुष २६ गते १:३९
धेरै मानिसले विभिन्न बहानामा पिसाब रोक्ने गर्छन् । अन्य कामलाई महत्व दिएर पिसाब रोक्नु भनेको शरीरको नियमिततालाई बिगार्नु मात्र हो । यदि तपाईमा पिसाब रोक्ने बानी छ भने तपाईलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छ । व्यक्तिको ब्ल्याडर (पिसाब थैली) नियमित खाली राख्नुपर्ने चिकित्सकहरुले बताउँदै...
२०७८ पुष २२ गते २३:४७
काठमाडौं । भुइँमा बस्न छोडेको कति वर्ष भयो ? बस्न र खाना खान पनि तपाईं कुर्सीकै प्रयोग गर्नुहुन्छ, हैन त ? अब भुइँमा सुत्नुभएको छ भनी प्रश्न सोध्दा तपाईं हाँस्नुहुन्छ होला । पहिला हाम्रा पूर्खाहरू भुइँमा नै सुत्थे । तर हामी आधुनिक भनाउँदाहरू झुटो...
ढाड दुख्ने समस्या देखि आजित हुनुहुन्छ ? ढाड दुख्ने समस्याको अचूक औषधि !
२०७८ पुष ११ गते १६:१६
कपुर सेतो अथवा पारदर्शी ठोस पदार्थ रहेको हो। कपुर परापूर्वकाल देखि पूजा-आजा र आयुर्वेदिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको हो। खाद्यान्न भण्डारणको लागि पनि कपुर लामो समय देखि प्रयोग हुँदै आएको छ। खाद्यान्नमा घून, किरा, कमिला इत्यादी नलागोस् भन्नको लागि बट्टामा कपुर राखेर खाद्यान्नको भण्डारमा...
परिवार नियाेजनमा अर्काे विकल्प ‘सायना प्रेस’ तीन महिने साधन नेपालमा !
२०७८ मंसिर २९ गते १५:४६
नवलपुर । परिवार नियोजनको अस्थायी साधनका रुपमा नेपालमा अर्को नयाँ साधन पनि आएको छ। सायना प्रेस नामक तीन महिने सुई नेपालमा पनि भित्रिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनस‌ंख्या मन्त्रालयको अनुमति र बेलायत सरकारकाे आर्थिक सहयाेगमा आईपास र मेरि स्टाेप अन्तर्राष्ट्रियको सहकार्यमा नेपालमा यसको परीक्षण सेवा...
२०७८ मंसिर २२ गते २१:४०
काठमाडौं । नेपालमा जाडोयाम सुरु भैसकेको छ । जाडोमा मानिसहरु सुत्दा मोजा लगाएर सुत्छन् । आज हामी मोजा लगाएर सुत्नु किन नराम्रो हुन्छ भनेर चर्चा गर्न गइरहेका छन् । यदि जाडोमा चिसोबाट बच्न बाक्लो मोजा लगाएर सुत्नेहरु मध्ये तपाई पनि हुनुहुन्छ भने यो खबर...
२०७८ मंसिर १७ गते ०:३२
काठमाडौं । चाड पर्व होस् वा अन्य विशेष समयमा महिलाहरूले महिनावारी रोक्ने औ’ष’धि प्रयोग गर्दछन्। विशेषगरी पूजाआजा तथा अन्य समयमा महिलाहरूले चिकित्सकको परामर्शबिनै औपधि पसलमा गएर आफूखुसी महिनावारी रोक्ने औ’ष’धिहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसरी खाइने औ’ष’धिहरूले महिनावारी केही दिन पर सार्न मद्दत गरे पनि...
२०७८ मंसिर ११ गते १७:५८
काठमाडौं । जाडो महिनामा नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती, स्वास्थ्यलाई भारी समस्या पर्ला पढ्नुहोस्। जाडो मौसम शुरू हुँदैछ। जाडोमा स्वस्थ र फिट रहन विभिन्न चीजहरूको ख्याल राख्नु पर्छ। जाडोमा चिसोका कारण धेरै समस्याहरूको जोखिम पनि रहन्छ। सामान्यतया धेरै मानिसहरूले जाडोमा यस्ता गल्तीहरू गर्छन्, जसको कारणले स्वास्थ्य...
२०७८ कार्तिक ३० गते १७:५२
काठमाडौं। पेट पोल्ने समस्या हामी धेरैमा हुन सक्छ । सामान्यतया खाली पेटमा वा बिहान उठ्ने बित्तिकै धेरैलाई पेट पोल्ने र अमिलो पानी मुखसम्म आउने गर्दछ । खानपिन हामीले के खाना खान्छौं, कति मात्रामा लिन्छौ यसको सीधा असर हाम्रो पेटमा पर्न जान्छ । पेट पोल्ने...
२०७८ कार्तिक २६ गते ११:०३
काठमाडौं– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी)ले आफ्नै सय शय्याको अस्पताल भएका नर्सिङ क्याम्पसका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। सिटीइभिटी अन्तर्गतका अन्य विषयको भर्ना प्रक्रिया यसअघि नै अगाडि बढेको भए पनि नर्सिङको भने अझै हुन सकेको छैन। परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका...
« अघिल्ला 123456… 19 पछिल्ला »